Hlola iMount Kilimanjaro, Tanzania - World Tourism Portal
Hlola iMount Kilimanjaro, eTanzania
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eMount Kilimanjaro
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMt. Kilimanjaro
Bukela ividiyo emayelana neMt. Kilimanjaro
Hlola iMount Kilimanjaro intaba-mlilo engasebenzi njengamanje enyakatho Tanzania, eduze komngcele nge Kenya. Kumamitha we-5,895 ngaphezulu kwezinga lolwandle, iKilimanjaro iyintaba ephakeme kunazo zonke e-Afrika nentaba ephakeme kakhulu yamahhala emhlabeni. Njengoba kunjalo - futhi sisizwa ukwenyuka kwayo okulula - iKilimanjaro isiphenduke indawo enkulu yabakhwela izintaba nabahambi ngezinyawo abavela emhlabeni jikelele.
Yize ibekwe eduze ne-Equator (330 km eningizimu), iNtaba iKilimanjaro idume njengentaba yase-Afrika ebanjiswe yiqhwa ekhuphuka emathafeni aseSavannah. Eminyakeni yamuva nje, nokho, izingwamza bezilokhu zinyamalala ngokushesha. ILilimanjaro National Park ivikela le ndawo engenhla kwamamitha we-2,700, entabeni futhi ifaka nezindawo ezi-moorland nezindawo eziphakemeyo, iShira Plateau, iKibo neMawenzi iziqongo. IPaki nayo inamakhorali ayisithupha noma amalungelo endlela edlula eKilimanjaro Forest Reserve. I-Forest Reserve, nayo eyi-Game Reserve, yasungulwa e-1921; Ipaki yasungulwa e-1973 futhi yavulwa ngokusemthethweni nge-1977.
Isimo seKilimanjaro sihle kakhulu. Le ntaba ingahlukaniswa njengezindawo zesimo sezulu i-5, indawo ngayinye inezilwane nezimbali zayo. Ukufika okuphansi kwentaba kulawulwa amahlathi ahlala eqabile. Ngaleso sikhathi. I-3,000m i-landscape iqala ukuguquguquka ibe yindawo yokubekelwa indawo yokubhukuda. Cishe i-4,000m ukubukeka komhlaba kuyindawo eyomile futhi enamadwala, kufana nokubukeka kwenyanga. Umngcele wesine uqukethe isilungiselelo se-glacial scree / silt dessert esihle kakhulu. Ingaphezulu leKilimanjaro liboshwe yingxenye yeqhwa ngamaqhwa amakhulu afakwe phakathi kwezikejana zentaba-mlilo. Izinguzunga zeqhwa bezilokhu zibuyela emuva eminyakeni edlule ye-40, noma kunjalo.
Intaba icebile ngezimbali nezilwane. Uthola ukubona izimo ezahlukahlukene zezulu eziqala kusuka kugxathu elalingezansi kwentaba kuya esifundeni seqhwa esiqongweni sentaba. Unamahlathi emvula asezindaweni ezishisayo, amahlathi agqamile, ama-moorlands kanye nezindawo eziwugwadule zase-alpine phakathi. Kuyinto efana nokuhamba usuka e-ikweyitha uye esigxotsheni se-arctic nje ngezinsuku. Uthola ukubona ezinye izitshalo nezimbali ezithile ezingafani nentaba eziqonde eMt Kilimanjaro. Noma ingekho iningi lezilwane zasendle entabeni, ungabona izinyathi zasendle, izindlovu nezingwe ngenkathi uhamba ngomgwaqo uM Lemosho. Uhambisana nabahwebi abahlomile ngosuku lokuqala lohambo ngenkathi uhamba ngendlela yeLemosho.
Woza uzilungiselele futhi wandise isipiliyoni sakho!
Ngakho-ke, amalungiselelo weKilimanjaro anele afaka ini? Ukusho lokhu okusobala: okukufanele, yilapho uyolijabulela kakhulu uhambo lwakho futhi kuphakama amathuba engqungquthela ephumelele. Cishe uzokwenyuka kanye ngeKilimanjaro empilweni, ngakho-ke uma unqume ukuthatha i-adventure, qiniseka ukuthi wenza okuningi kukho! Ukukhuphuka ngokuqinisekile kuyindlela efanele yokukhumbula… lindela ukubukwa okuhle okumangalisayo, umoya omusha wezintaba ngaphansi kwesibhakabhaka esicacile, kodwa futhi nenseleleko engokomzimba nengokwengqondo.
Ngenxa yokusondela kweNtaba iKilimanjaro ne-ikhweyitha, lesi sifunda asizizwa zimbi kakhulu zezulu zasebusika nezasehlobo, kodwa kunalokho kube nezikhathi zonyaka ezomile nezinethayo. NgoJanuwari nangoFebhuwari yizinyanga ezifudumele kunazo zonke, u-Ephreli noMeyi yizinyanga ezidonsa kakhulu, uJuni noJulayi yizinyanga ezipholile kunazo zonke, kanti u-Agasti noSepthemba yizinyanga ezomile kunazo zonke. NgoJanuwari, ngoFebhuwari nangoSepthemba kubhekwa njengezinyanga ezinhle kakhulu zokugibela iKilimanjaro ngokuya ngesimo sezulu.
Isikhumulo sezindiza esiseduze kakhulu i-Kilimanjaro.
Izindleko zemishini, ama-visa, ukugoma nemithi zivame ukukhohlwa abantu abazobe benyuka. Ngokujwayelekile uzosebenzisa noma yikuphi phakathi kwe- $ 500- $ 1,500 kumishini njengoba iningi labakhweli lidinga ukuthenga isikhwama sokulala esingesihle kakhulu, isikhwama esidonsa, izembatho ezifanele nezinye izinto zokukhuphuka.
Ungadinga futhi nokuthola ukugoma i-Yellow Fever njengoba lokhu kuyisidingo esiyisibopho sokungena Tanzania uma ngabe uhamba ngezwe elibhuqayo njenge Kenya. Ungahle uthande ukuthola imijovo yokunyusa nge-Hepatitis A nezinye izifo ezihlobene. I-Tanzania indawo yomalaleveva, kanti uhlobo lomalaleveva eTanzania lungabulala. Ngenkathi omiyane bengekho endaweni ephakeme (ngaphezu kwamamitha we-1,800) lapho uzobe uchithe khona iningi lohambo lwakho, uzovezwa ngaphambi nangemva kokukhwela. Ngakho-ke, kunconywa kakhulu ukuthi uthathe amaphilisi omalaleveva.
Ekugcineni kuzodingeka ukuthi uthole i-visa yaseTanzania. Ungathola i-visa ngaphambi kokusuka noma ekufikeni eTanzania.
Ukuze ukhwele Kilimanjaro kufanele usebenzise umhlahlandlela onelayisense. Uma ungazi kahle izinto zokukhwela iKilimanjaro, okuwukuphela kwendlela enengqondo yokuhamba i-Kilimanjaro ngokusebenzisa umshini wokuvakasha. Akukho-friji kwe-5 usuku, ubusuku be-4 buhamba ngomgwaqo iMarangu bunikezwa kusuka cishe ku- $ 1,100. Kodwa-ke, uma ungajwayele ukuphakama, kunconywa kakhulu ukuthi uthathe uhambo lwezinsuku lwe-7 noma lwe-8 oluqala ngaphezulu kwe- $ 1,600 ngokuya ngomzila. Yazi ukuthi imali ayiveli nje ngokuhluka ngenxa yendlela nobude bokukhwela, kepha ngokuyinhloko kuya ngekhwalithi yenethiwekhi opharetha kwezokuvakasha kanye nokunikezwa kwezidingo Yenza ucwaningo lwakho bese ubuza imibuzo eminingi ngangokunokwenzeka ngaphambi kokuthatha isinqumo ngomqhubi wokuvakasha. Abasebenza ukuvakasha abanomthwalo wemfanelo abaphatha abasebenzi babo ngokuziphatha futhi baqashe abaqondisi abaqeqeshiwe abaqeqeshiwe ukuze banakekele inhlala-kahle yakho ebiza kakhulu. Ngamanani okuqala angenhla, akunakwenzeka ukuthi usebenzise ukhuphuka ngokunenzuzo, ngokusemthethweni, nangaphandle kokuxhaphaza abanikeli bakho.
Ukuthola izikhombisi-ndlela kubaqondisi kanye nabadwebi kuyinto ejwayelekile. Umuntu okhuphukayo oyedwa uzoba nomhlahlandlela ojwayelekile, abathathu kuya kwabahlanu abapheki kanye nompheki. Njengosayizi weqembu kukhuphuka ukwenyuka kweqembu lokusekelwa elikhuphukayo ngesilinganiso esifanayo. ILilimanjaro National Park (KINIPA) ibeka isilinganiso esincane somhlahlandlela owodwa wabo bonke abakhwela i-2 kanye nesisindo esiphezulu kumpheki ngamunye we-20kg. Abasebenzisi bezokuvakasha benzelwe ukuhambisana nalezi zindinganiso. Ngokuvamile, kufanele usebenzise isabelomali esingu- $ 20- $ 25 ngosuku lwabaqondisi, $ 15- $ 20 ngosuku lwabaqondisi abasizi, $ 15 ngosuku lompheki wakho kanye ne- $ 10 ngosuku lwe-porter ngayinye. Ngokuya ngobude bokukhuphuka kwakho kanye nosayizi weqembu lakho, isabelomali sakho sethiphu ephelele kufanele okungenani sibe yi- $ 250- $ 500.] Kunconywe ukuthi ubale ukuthi uzolinganisa kangakanani iqembu lakho lokusekela ngaphambi kokufika entabeni futhi lungiselela imvilophi ngayinye yelungu ngalinye lokusekela elikusabalalisayo ekugcineni kwekhwela. Amagiya asetshenziswa ngabathekisi iningi lawo lincane kakhulu futhi ngokuvamile alifaneleki neze ithambo. Uma ungasindisa amanye amagiya akho angemukelwa kakhulu ngabakhiphi noma abaqondisi bakho.
Ngaphandle kwe-evamile eyaziwa ngokuthi yi-Kilimanjaro ekhuphukayo, kunokuningi esingakubona eNtabeni iKilimanjaro. Ohlangothini olusentshonalanga lweKilimanjaro emzileni we-lemosho abahambi bangenza izinsuku ze-2 noma uhambo losuku lokuvakasha kwasendle kanye nokushayela umdlalo.
E-Mount Kilimanjaro kunezimpophoma zemvelo ukubona njengezimpophoma zaseMateruni kanye nezimpophoma zaseKinukamori. Eduze noma kulezi zimpophoma zeKilimanjaro, kukhona izinyoni, izinkawu nezilwane eziningi zasendle. Emthambekeni weNtaba Kilimanjaro kukhona amachibi aqhakaza intaba njengechibi iChala namasiko ahambela isiko lokuhlola isizwe sakwaChagga emithambekeni yeNtaba iKilimanjaro
Uhambo lwezinsuku ezingama-Kilimanjaro National Park Hiking luyatholakala kulabo abangafisi ukukhuphukela esiqongweni seKilimanjaro, kodwa ufisa ukubona imvelo yamapaki ehlukile, ubone ezinye izilwane zasendle futhi uthole umbono wokuvalwa kwengqungquthela.
Izidingo zokudla ezahlukahlukene ziyahlangabezana nabathumeli nabapheki abeza nawe entabeni. Kodwa-ke, ikhwalithi yokudla incike kudumela lomqhubi we-tour okhuphuka naye. Izinga lokudla livame ukwehla liye ngasekupheleni kohambo ngenxa yokwehliswa kwezilinganiso ezithwalwa ngabathumeli futhi ngenxa yokudla kuba nzima ekupheleni kohambo. Kunconywa ukuhambisa ukudla okuphezulu okunamandla njengamashokhethi namantongomane wokusinda nokuphumelela kokuphothula kohambo. Kungaba usizo ukuphatha amanye amaphakethe we-noodle alungiselelwe futhi njengezinto zokuwapheka ekugcineni kohambo.
Ukuhlala u-hydrate entabeni kubaluleke kakhulu. Isizathu esikhulu esenza abantu bahlupheke ngenxa yokugula kwe-Acute Mountain Sickness yingoba bayaphelelwa ngamanzi emzimbeni. Kufanele uhlose ukuphuza okungenani i-3L yamanzi ngosuku. Abaqondisi bakho bazokuhlinzeka ngamanzi nge-Day 1 ye-hike futhi kusukela lapho abathutheli baqoqa amanzi emifudlaneni esezintabeni. Kubalulekile ukuthi uhlanze la manzi usebenzisa amaphilisi okuhlanza amanzi. Kunconywa ukuthi ungeze ama-powders aphezulu wamandla ukwenza ngcono ukunambitheka futhi kukunikeze amandla okungeziwe. Futhi, kunconywa usawoti omningi womlomo (i-ORS) ukuvikela ukomisa ngenkathi uhamba entabeni.
Kuvunyelwe ukumisa amatende eMt Kilimanjaro izinsuku eziningi njengoba ufuna ngokukhokha imali ebekiwe kwiziphathimandla zikazwelonke zePilimanjaro futhi ukanise kunoma yimaphi amakamu aseduze njengeMachame Hut noma iMweka Hut.
Ukumbozwa kweselula kwe-GSM kuyatholakala engqungqutheleni yentaba. Amanethiwekhi ahlukahlukene afana neVodacom, Zaintel neTigo asebenza esifundeni futhi angatholwa ngamaphuzu ahlukahlukene aphezulu entabeni. Kodwa-ke, njengoba kungekho ugesi entabeni, kuyalulekwa ukuthi kuphathe amashaja okuhamba ephathekayo okuhamba kuwo ukuze kutholakale izinsizakalo ezihamba nendlwana ezihamba ngentaba.
Ukugonyelwa kaningana kunconywa umkhuhlane ophuzi, i-tetanus, typhoid, polio, Havrix (Hepatitis A Vaccine), kanye ne-anti-malaria prophylactic.
Ngesikhathi sokuhamba kweKilimanjaro kungenzeka ukuthi ngaphezu kwe-75% yabahambi abahamba ngezinyawo bazothola okungenani uhlobo oluthile lokugula oluphakeme olubangelwa ukwehluleka komzimba ukuzivumelanisa ngokushesha ngokwanele nezinga elincishisiwe le-oxygen emoyeni endaweni ephakeme.
Lolu hlobo lokugula lokuphakama lubizwa ngokuthi i-altoxia, igama elisetshenziswa cishe kuphela e-Kilimanjaro, ngoba le yiyona kuphela intaba evame ukuhlangana lapho lezi izindawo eziphakeme kakhulu zihlangana khona ngokushesha okukhulu.
Ukukhetha imizila emide kungcono uma ukhetha indlela ephephile engqungqutheleni. Kokubili iLemosho Route kanye neNorth Circuit kuhlinzeka abagibeli ngezikhathi ezinde zokukhwela ezivumela izinketho ezingcono kakhulu zande ngokuguquguquka ngenkathi kukhuphuka iMount Kilimanjaro. Njenganoma yikuphi ukukhuphuka kokuphakama okuphezulu, ukuthatha isikhathi esidingekayo sokuvumela umzimba wakho ukuvumelanisa kahle nokuguqukela kokuphakama kubalulekile.
Ukulungiselela uhambo olungemuva lwe-kilimanjaro kudinga ukubuyekeza imininingwane yamanje ngesimo sendawo yokwakheka kwe-Kilimanjaro, isimo sezulu eKilimanjaro, amadwala aqhuma intaba-mlilo, ukuphakama kwamakhilomitha-skwele endleleni ethile yokuzikhethela, imininingwane yokugibela imigwaqo yaseKilimanjaro, ukuphepha nezokuphepha, ihlathi nezilwane zasendle, ukuhlanganisa kanye nezindleko zamanani ukukhuphuka kilimanjaro. Le mininingwane ingatholwa ku-inthanethi mahhala nangokubuza oxhumana nabo online. Ngaphezulu yiya lapha ngeblogi yaseMount Kilimanjaro: - Mayelana neMount Kilimanjaro neTanzaniaanite
Kunezici eziyisikhombisa eziphambili ezithinta ukwanda nobunzima bokugula kwe-Kilimanjaro
Kutholakala ukutholakala kwezwi
Hydration kanye nokudla
Ukuba semzimbeni kokulindelekile
Ukusetshenziswa kwezinhlelo ze-oxygen noma izidakamizwa
Zilungiselele ngaso sonke isikhathi bese usebenzisa uhlu lwekhithi elizame futhi elihloliwe. Qiniseka ukuthi wenza umsebenzi wakho wesikole nokuthi unazo zonke izinto ezibalulekile. Gcina usesikhathini sezulu Kilimanjaro. Izimo zingathandeki futhi zibe yingozi kokuthandeka futhi kube mnandi, futhi uhambo oluhlelwe kahle kufanele lucabangele amaphethini wesimo sezulu.
Ukuhamba ngezeluleko kanye nokuziphatha okuhle
Yini iKilimanjaro enikayo? Lapho uthola i-Kilimanjaro i-Tipping kuyindlela ebalulekile neyisiko yokukhokha iqembu lakho elisezintabeni. Ibona ukusebenza kwabo kanzima ekusizeni ingqungquthela. Kubhekwa njengesiko lendawo yonke e-Kilimanjaro.